फरवार्डले ६५ % लाभांश दिँदै, कहिले हुँदैछ एजीएम ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » फरवार्डले ६५ % लाभांश दिँदै, कहिले हुँदैछ एजीएम ?
काठमाडौं - फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले पाँचौ वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । कम्पनीले सभाका लागि चैत ४ गते बोलाएको छ । कम्पनीले उक्त सभामा ६५ प्रतिशत लाभांश दिने गर्ने विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने छन् ।
कम्पनीको पुस २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट शेयरधनीलाई चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत बोनस शेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । कम्पनी सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश प्रस्ताव साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण हुनेछ ।